Soosaarayaasha PCB ee rogrogmi kara | Shiinaha PCB debecsan Factory & Shirkado
2 lakabka Flexible PCB FPC with FR4 stiffener
Kani waa 2 lakab oo PCB ah oo jilicsan oo loo isticmaalo telecom 4G moudule. Pandawill waxay soosaari doontaa lakab keliya iyo laba-geesood ah iyo Multilayer illaa 10 lakab oo wareegyo wareegsan ah. Dhammaadka heerka dusha sare waa ka madax banaan yahay HASL iyo ENIG. Waxay kuxirantahay shuruudaha, tirada iyo qaabeynta, dusha sare waxaa doorbidaya laser, laakiin qashin farsameynta ayaa sidoo kale macquul ah.
Wareeg dabacsan oo FPC leh 3M adke & qubbad